शिक्षा::Best News Experience from Nepal
बुटवल । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाफल आज (सोमबार) प्रकाशित गर्ने भएको छ । बोर्डले विगतमा विज्ञान विषयको नतिजा सुरुमा र केही समयपछि मात्र अन्य विषयको नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न परीक्षामा मुलुकभरबाट चार लाख विद्यार्थी सहभागी थिए। बोर्डले पहिलोपटक सबै विषयको परीक्षाफल एकैचोटि प्रकाशन गर्न लागेको हो । ...
विद्यालयलाई २ करोडका आइसिटी सामग्री
बुटवल । विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सुधारका विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सूचना प्रविधिका उपकरण प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै नगरपालिकाले शैक्षिकस्तरका सुधारको पहल थालेको थियो । नगरपालिकामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा १ करोड ७४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रोजेक्टर र प्रिन्टर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका १८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई वितरण गरेको हो। नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यायललाई स्मार्ट कक्षा सञ्चालनसँगै शैक्षिकस्तर सुधारमा प्रोत्साहन होस् भनी आइसिटी सामग्री...
सगरमाथामा कक्षा ११ लाई स्वागत एवं अभिमुखिकरण
बुटवल । देवदह ७ शितलनगरमा संञ्चालित सगरमाथा मा. वि. ले कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई स्वागत गर्दै अभिमुखिकरण समेत गरेको छ । देवदह नगरपालिकाका मेयर हिरा बहादुर खत्रीले प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै सगरमाथाले रुपन्देहीको पुर्वि क्षेत्रमा विगत १० वर्ष देखि विज्ञान व्यावस्थापन लगाएत विषयहरु संञ्चालन गर्दै आएकोमा अब व्यावाहारीक ज्ञान दिन सक्ने खालका र जिवन उपयोगी खालका शिक्षा दिने विषयहरु रोज्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विद्ययालयका प्राचार्य कृष्ण...
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै
पाल्पा । पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक धारको कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएपछि पठनपाठन व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छन् । जिल्लामा गाउँ तथा शहरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयले कृषि बाली विज्ञान, पशुविज्ञान, सिभिल इञ्जिनीयरिङ्ग, कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङ्ग जस्ता शिक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, निस्दी गाउँपालिका–५ ढुङ्गानावेशीको जनता मावि, माथागढी गाउँपालिकाको शौभाग्य माविमा कृषि...
सैनामैना । सैनामैना ८ रामापुरमा रहेको श्री सिद्धार्थ मेमोरियल एकेडेमी बोडिङ् स्कुलमा ईन्ट्रयाक्ट क्लव अफ सिद्धार्थ सैनामैना गठन गरिएको छ । शुक्रबार विद्यालयको सभाहलमा रोटरी क्लव सैनामैनाको स्पोन्सरमा सार्थक न्यौपानेको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय ईन्ट्रयाक्ट समिती गठन गरिएको हो । जसको उपाध्यक्षमा समिक्षा कंडेल,सचिवमा विधान घिमीरे,कोषाध्यक्षमा अमिर कुमार सिंह रहनु भएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा बर्षा न्यौपाने र विराज कार्की रहनु भएको छ । समितीले विद्यालयका शिक्षक विष्णु गौतमलाई ईन्ट्रयाक्ट क्लव...
बाँके । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनसँगै नेपालगञ्जमा रहेको प्रशासनिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय बुटवल र दाङ सारिएपछि नेपालगञ्जको विगतको प्रतिष्ठा र गरिमा गुमेको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालय नेपालगञ्जमा स्थापनाको आशाले भने यतिबेला नेपालगञ्जलाई केही राहत महसुस भएको थियो । तर, बुधबारदेखि यो आशा पनि निराशामा परिणत भएपछि नेपालगञ्जमा झनै सन्नाटा छाएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन समितिले...
काठमाडौं । नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या ६३ हजार २ सय ५९ पुगको छ । सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या घट्दैगएको दाबी गरेतापनि आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ को तुलानमा गत वर्ष ५ हजार विद्यार्थीको संख्या बढेको हो । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिएको तथ्याङकअनुसार गत वर्ष अष्ट्रेलियामा ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । असार मसान्तसम्म अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न...
काठमाडौँ  । भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजले संसदीय छानबिन चलिरहँदा पनि एउटै ब्याचमा १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँसम्म घटबढ गरिएको छ, भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले ६२ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको एमबीबीएस विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । एमबीबीएस, बीडीएस, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयमा चितवन मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा अचाक्ली बढी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । एक विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको शुल्क सिटमा ६२ लाख बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘४५ लाख बुझाइसकेँ, अझै...
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा लिँदै आएका छन्। उनले अब भने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)सरह मात्र सुविधा पाउनेछन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली जारी गरी आफूखुसी निर्णयमा रोक लगाएको छ। बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ। बोर्ड शिक्षा ऐनअनुसार सञ्चालन भए पनि आफूखसी निर्णय गर्दै सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेको थियो। त्यसपछि...
कञ्चन । बिगत १० बर्षदेखी रुपन्देहीको सैनामैना -१० सालझण्डीमा सन्चालन हुदै आएको मेगाटेक ईन्स्टिच्युटले कञ्चनमा आफ्नो शाखा शिक्षालयको विशेष कार्यक्रम गरी संचालनमा ल्याएको छ। मेगाटेक इन्स्टिच्युटको शाखा शिक्षालय कञ्चनको हरैयामा शुभारम्भ कन्चन गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले गर्नु भएको हो। शिक्षालयको शुभारम्भ गर्दै कन्चन गाँउपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले प्राबिधिक शिक्षाको आवश्यकता महशुस भईरहेको अवस्थामा हरैयामा पनि यस मेगाटेकले कम्प्युटर शिक्षा सन्चालन गरेकोमा खुसी ब्यक्त गर्दै प्राबिधिको समयमा कम्प्युटर शिक्षा बिना...